Shina Nonwoven / PP / PVC / PE / EVA Bags orinasa sy mpanamboatra | ShiningPlast
Kitapo Nonwoven / PVC / PE / EVA
ShiningPlast dia mamokatra kitapo isan-karazany avy amin'ny Nonwoven ka PVC, amin'ny fitaovana PE mankany EVC. Manana ekipa fanjairana matotra sy trano fanontana ihany koa izahay.
Avy amin'ny PE hatramin'ny PVC mankany amin'ny EVC ary tsy roa. Izahay dia mamokatra kitapo isan-karazany misy endrika takiana.
Zipper dia misy
Zipper dia azo ampiharina amin'ireto kitapo ireto isaky ny takinao.
Fanontana miloko isan-karazany
Azontsika atao ny manonta loko maro isan-karazany ao anaty kitapo.
Ny fahaizantsika lehibe sy ny ekipa mpanjaitra lehibe dia afaka manampy ny fangatahana lehibe ataonao.
Previous: Blanket vita amin'ny konkretera
Manaraka: Nonwoven Ho an'ny Fambolena